လက်ရှိအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် စင်ကာပူမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အချိန်မရွေး ငွေလွှဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အာရှနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများသို့လည်း မကြာခင်အချိန်အတွင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
You can now send money anytime from Singapore to Myanmar with our cross-border remittance service. New markets across the Middle East and Asia for inbound remittance to Myanmar are coming soon.
MySQUAR သည် Uber Remit နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းကာ wallet ထဲသို့ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် သော်လည်းကောင်း၊ Debit ကတ်များအသုံးပြု၍ သော်လည်းကောင်း ငွေထည့်သွင်းနိုင်ပြီး စင်ကာပူမှ မြန်မာသို့ ငွေလွှဲခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငွေလက်ခံသူများထံသို့လည်း OK Dollar ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ ငွေထုတ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ငွေထုတ်ယူမည့်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ၈,၀၀၀ ကျော်သော OK Dollar အေးဂျင့်များမှာသာမက၊ တိကျသေချာသည့် ဘဏ်များနှင့် စာတိုက်တို့မှတစ်ဆင့် အဆင်ပြေစွာ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MySQUAR has partnered with Uber Remit in Singapore for users to deposit money by debit card or online bank transfer and with OK Dollar in Myanmar for recipients to withdraw money. Withdrawals can be made at over 8,000 OK Dollar agent outlets nationwide and at certain bank and post office branches.
တခြားသူတွေနဲ့ မတူတာတွေက ဘာတွေလဲ
Debit ကတ်၊ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြုကာ Uber Wallet အတွင်းသို့ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၄ နာရီ/ တစ်ပတ်လုံး ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း
ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းထား မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခ တစ်စုံတစ်ရာ ပေးချေရန်မလိုအပ်ခြင်း
လိုင်စင်ရရှိပြီးဖြစ်ခြင်း နှင့် သုံးစွဲသူကို ဦးစားပေးသော ပံ့ပိုးသူများဖြစ်ခြင်း
Add money to your wallet by debit card or online banking and transfer money to Myanmar 24/7.
No fees and great currency exchange rates.
Only licensed and fully compliant providers are used.
မြန်မာနိုင်ငံကို ငွေလွှဲချင်တဲ့အခါ Uber ရဲ့ ငွေလွှဲအကောင့်ကို ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ Google Play သို့မဟုတ် Apple Store ကနေ downloadလုပ်ပြီး ဖြည့်ရမယ့်အချက်အလက်တွေကို အကုန်ဖြည့်သွင်းပါ။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကို ထည့်သွင်းပြီး PIN နံပါတ်ကို အသုံးပြုကာ ဝင်ရောက်ရပါမယ်။ အကောင့်ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်း ဗီဒီယိုလေးကို ဒီနေရာမှာ ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ FAQ link မှတဆင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
How do I open an Uber Remit account to transfer money to Myanmar? Download the Uber Remit app from Google Play or the Apple Store and complete the registration process, verify your email address and then sign back into the app using your PIN. Please click here for an instructmental video on how to open account.
Don't have email? SMS verification is coming soon!